Ayikwazi ukwenza yogcino iCloud: Oonobangela kunye Solution | IPhone iindaba
Ayikwazi ukwenza yogcino iCloud: Oonobangela kunye Solution
Iindaba ze-IPad | | iOS 9, Izifundo kunye neencwadana
Umyalezo "Awukwazanga ukwenza isipele kwi-iCloud kuba akukho sithuba saneleyo" ungaphaya kokuqheleka kuwe. Ubungakanani obuhlekisayo beakhawunti yasimahla ye-iCloud esinikwa yiApple, amandla amakhulu ezixhobo zayo kunye nokuphuculwa kwekhamera kwi-iPhone kunye ne-iPad yethu nokuba ubambe iividiyo ezingama-4K yenza ukuba ukwazi ukwenza isipele iCloud nge-5GB kuphela yomthamo phantse ungenakwenzeka. Sichaza ukuba kutheni le ngxaki kwaye zeziphi izisombululo ezinokubakho kuyo.
1 ICloud backup, isiqinisekiso sedatha yakho
2 Ngaba kuya kufuneka ndibhatalele iakhawunti enkulu?
3 Lawula kakuhle idatha egcinwe kwi-iCloud
4 Khetha ukuba zeziphi izicelo eziza kungena kwindawo yogcino
5 Cima idatha ekungafuneki ukuba uqhubeke nayo kwi-iPhone yakho
6 Ukuba konke oku akusebenzi, cinga ngokwandisa amandla
ICloud backup, isiqinisekiso sedatha yakho
ICloud backup ngumsebenzi okhuthazwa kakhulu ukuba usebenze. Inyaniso yokuba yenziwe ngokuzenzekelayo, yonke imihla, inemfuno kuphela yokuba i-iPhone yakho okanye i-iPad iqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-WiFi kunye nokutshaja, sisiqinisekiso sokuba kwimeko yelahleko, ukusilela okanye ukubiwa kwesixhobo sakho idatha yakho ikhuselekile kwaye wena inokuyifumana ngokulula. Ke ngoko, ingxaki esithetha ngayo ibalulekile, kuba yidatha yakho, iifoto zakho, iividiyo zakho, njl. abo basengozini.
Ngaba kuya kufuneka ndibhatalele iakhawunti enkulu?
Umyalezo ovela kwi-iPhone yakho ukunika iindlela ezimbalwa: vala okanye uhlawule iakhawunti enkulu. Ewe, isisombululo esinye kukuba, yandisa amandla e-akhawunti yakho ukuya kwi-50GB (€ 0,99 ngenyanga), 200GB (€ 2,99 ngenyanga) okanye 1TB (€ 9,99 ngenyanga). Kodwa ayingabo bonke abasebenzisi abafuna ukwandisa iakhawunti yabo ukuze bakwazi ukwenza ugcino lwabo ngokuchanekileyo.. Into efanelekileyo kukulawula i-5GB i-Apple ekubonelela ngayo, kwaye ukuba ufuna amandla angaphezulu, khetha isicwangciso sexabiso esilungele iimfuno zakho.
Lawula kakuhle idatha egcinwe kwi-iCloud
Inyathelo lokuqala kukwazi into endinayo kwi-iCloud, kwaye yeyiphi eyona nto ndiyifunayo. Ukwenza oku, yiya kuseto lwe-iOS kwaye kwi-menu ye-iCloud ucofe ku "Ukugcina". Kule thebhu uza kwaziswa ngomthamo opheleleyo onawo kunye nomthamo wasimahla oshiyekileyo. Cofa ku "Lawula indawo yokugcina" ukubonisa into egcinwe kwi-iCloud.
Into yokuqala eya kuvela iya kuba zonke iikopi zokulondolozwa kwezixhobo zakho ezinxulumene neakhawunti yakho ye-iCloud. Jonga kakuhle ukuba zeziphi izixhobo ofuna ukuzigcina kwiakhawunti yakho ye-iCloud, kuba ezinye zingenakukukhathalela kwaye iikopi zazo zithatha indawo exabisekileyo onokuzisebenzisela abo bakugqala kubalulekile. Umzekelo, bendisenayo ikopi ye-iPhone 6 Plus yam endingasenayo nam, ke ndiyicimile ndaphinda ndafumana i-400MB eyayihlala ngokungeyomfuneko.
Ukongeza kwii-backups, kukho izicelo ezithatha indawo ye-iCloud. Zilapha nje ngezantsi kolwazi malunga ne-backups, kwaye zibonisa indawo apho isicelo ngasinye sihlala nedatha yaso kwi-iCloud. Ukuba ufaka isicelo esihambelanayo, ukucofa kwiqhosha lokuhlela kuya kukunika ithuba lokucima loo datha. Ngokubanzi, oku akuthethi indawo eninzi kakhulu, ke ayifanelanga ukuba inikwe ukubaluleka ngakumbi nokuba.
Kodwa kukho isicelo esinokuthatha indawo yakho eninzi: WhatsApp. Ndihlala ndicoca izingxoxo kunye neefayile zemultimedia, ukanti ungangqinisisa ukuba ndinendawo engaphezulu kwe-600MB, ezixakekileyo kuba i-WhatsApp izenzela indawo yayo kwi-iCloud yazo zonke izingxoxo kunye nomxholo wemultimedia. Olu gcino lwenziwe ukuba lusebenze kuseto lwesicelo ngokwalo, kwaye kuyacetyiswa ukuba lusebenze, kodwa emva koko sinokucima ugcino lukaWhatsApp lwee-backups ezenziwe yi-iOS, kwaye ke siphephe ukuba nendawo ephindwe kabini.
Khetha ukuba zeziphi izicelo eziza kungena kwindawo yogcino
Ugcino lwe-iCloud luvumela iinketho ezithile zoqwalaselo, ukukwazi ukukhetha ukuba zeziphi izinto ezifakiweyo kwaye ezingekhoyo. Ukubuyela kwimenyu yezicwangciso> iCloud> yokugcina> Lawula ukugcinwa kunye nokukhetha isixhobo ofuna ukusicwangcisa, ungazijonga ezo zinto ungafuni ukuxhaswa ngazo. Ukongeza, apha ngezantsi kwesicelo ngasinye ibonisa ubungakanani bayo, uya kuyazi ukuba ungasigcina kangakanani isithuba. Njengoko ubona, kubandakanya i-WhatsApp kwikopi ye-iCloud kundithathela i-1,2GB, kwaye i-WhatsApp ngokwayo sele iyenza ikopi yayo kwi-iCloud ezimeleyo nge-iOS, ke ukuhlala kwindawo kabini kwidatha efanayo akunangqondo kwaye eyona nto ifanelekileyo kukuba cima enye yazo (ndicebisa ukuba ucime le kopi kwaye hayi i-WhatsApp uqobo). Okufanayo kunokwenziwa nezinye iinkqubo.
Cima idatha ekungafuneki ukuba uqhubeke nayo kwi-iPhone yakho
Ndiyaqonda ukuba sonke siyathanda ukuphatha iifoto zethu kwi-iPhone ukuze sizibone okanye sizibonise abahlobo bethu, Kodwa ukuba unefoto enkulu nevidiyo, ayizukulingana kwi-iCloud. Eyona nto icetyiswayo, ukongeza ekugcineni indawo ngenxa yezizathu zokhuseleko, kukuba ukhuphele iifoto kwikhompyuter yakho amaxesha ngamaxesha kwaye ucoce i-reel ye-iPhone kunye ne-iPad yakho. Awuzubeka emngciphekweni wokuphulukana nedatha kwimeko yelahleko okanye ukusilela kwesixhobo sakho, kwaye uya konga nendawo.
Ukuba konke oku akusebenzi, cinga ngokwandisa amandla
Ukuba emva kwazo zonke ezi ngcebiso awukabinandawo kwi-iCloud yokwenza ikopi yakho, mhlawumbi lixesha lokucinga ngokwandisa ubungakanani beakhawunti yakho ngokuhlawula i- € 0,99 ngenyanga. Njengoko ubona kwimifanekiso enokubanakho kwaye ndiyavuya kuba andinangxaki ngeICloud.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 9 » Ayikwazi ukwenza yogcino iCloud: Oonobangela kunye Solution
Abazali bakaSiri uViv balungiselela ukumilisela enye imveliso enkulu yobukrelekrele
Amakhwenkwe amakhulu eSilicon Valley akhangela iindawo ezinkulu apho aya kuphuhlisa khona izithuthi ezizimeleyo ezilandelayo